Inkqubo ye-Visa yaseIndiya | Isicelo seVisa yaseIndiya kwi-Intanethi | Ulwazi loMtyeleli
«Iindaba kunye neeNdwendwe zoLwazi
«Inqaku eladlulayo Inqaku elilandelayo »
Inkqubo ye-Visa yaseIndiya
IFomu yokufaka isicelo seVisa yaseIndiya yayiyifom esekwe ephepheni kude kube ngo-2014. Ukusukela ngoko, uninzi lwabahambi kwaye bafumane izibonelelo zenkqubo yokwenza isicelo kwi-Intanethi. Imibuzo eqhelekileyo ngokubhekisele kwiSicelo seVisa saseIndiya, ukuba ngubani ekufuneka eyigqibile, ulwazi olufunekayo kwisicelo, ixesha elithathwayo ukugcwalisa, nayiphi na imiqathango, iimfuno zokufaneleka, kunye nesikhokelo sendlela yokuhlawula sele sinikezelwe ngokweenkcukacha koku ikhonkco.
Kukho la manyathelo alandelayo kwiNkqubo yeVisa yaseIndiya:
Inyathelo loku-1: Ugqibile Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya.
Inyathelo 2: Wenza intlawulo usebenzisa nasiphi na isixa semali engama-135 usebenzisa ikhadi letyala, ikhadi lokuthenga, jonga, iWallet, Paypal kuxhomekeka kwilizwe lakho.
Inyathelo 3: Unikezela ngeenkcukacha ezongeziweyo ezifunekayo.
Inyathelo 4: Ufumana i-Visa yase-Indiya ekhompyuter kwi-Intanethi (eVisa India).
Inyathelo 5: Uya kwisikhululo seenqwelomoya.
Ukukhuphela: Kwigcuntswana elincinci lamatyala sinokunxibelelana nawe ngexesha lenkqubo ye-Visa yaseIndiya efana nokulahleka kwepasipoti yakho, isicelo kwakhona se-visa xa i-Visa yaseIndiya yangoku isasebenza, okanye ukubuza ngakumbi malunga neenjongo utyelelo lwakho njengoko kufunwa yiOfisi yokuHamba kaRhulumente wase-India.
Inqaku loku-1: Akukho nqanaba lenkqubo yokwenza isicelo oyacelwa ukuba uye kwiKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya okanye kwindlu yozakuzo yaseIndiya.
Qaphela 2: AKUFANELE uye kwisikhululo seenqwelomoya kude kube siphumo Inkqubo yokufaka isicelo se-Visa ye-India sele igqityiwe. Kumaxesha amaninzi imeko ziziphumo ngempumelelo ngemeko ye IXELisiwe.
Zeziphi iinkcukacha ezifunekayo kwiFom yesicelo seVisa yaseIndiya?
Iinkcukacha zakho, iinkcukacha zencwadana yokundwendwela, umlingiswa kunye neenkcukacha zetyala lolwaphulo-mthetho oludlulileyo ziyafuneka ngaphambi kokwenza intlawulo.
Emva kokuba kwenziwe intlawulo ephumeleleyo, iinkcukacha ezongeziweyo ziyafuneka kuxhomekeka kuhlobo lwe-Visa oyifayilileyo kunye nobude bexesha lokundwendwela. Utshintsho lweFomu yesicelo i-India Visa ngokusekwe kuhlobo kunye nexesha lokundwendwela kwakho.
Yintoni inkqubo yokufumana iVisa yaseIndiya?
Inkqubo yile apply online, yenza intlawulo, unike naziphi na iinkcukacha ezongezelelweyo. Zonke iinkcukacha ezongezelelekileyo ezifunwa nguwe ziya kubuzwa nge-imeyile oyibhalisileyo kule webhusayithi. Unokubonelela ngokukhuselekileyo ngeenkcukacha ezongeziweyo ngokucofa ikhonkco kwi-imeyile.
Ngaba iVisa yaseIndiya ifuna iinkcukacha zosapho lwam njengenxalenye yeFomu yeSicelo seVisa yaseIndiya?
Emva kokwenza iinkcukacha zosapho zokuhlawula, iinkcukacha zeqabane kunye nabazali ziya kufuneka kuninzi lwamatyala.
Ukuba ndiza kuShishini ndiye eIndiya, zeziphi iinkcukacha azifunayo kwifomu yesicelo seIndiya Visa kum?
Ukuba undwendwela i-India ngokurhweba okanye ukurhweba, uya kucelwa iinkcukacha zenkampani yaseIndiya, igama lesalathiso eIndiya kunye nekhadi lakho lokundwendwela / ikhadi lebhizinisi. Ngolwazi oluthe kratya kwi I-eBusiness Visa undwendwela apha.
Ukuba ndiyeza kunyango e-India ndisiya e-India, ngaba zikho ezinye izinto eziqwalaselwayo okanye ezifunwayo kwi-Fomu yesicelo se-Visa yase-India?
Ukuba undwendwela iIndiya Unyango loNyango Kufuneka ke ileta esuka esibhedlele kwiletahedi yesibhedlele ichaze injongo yotyelelo lwakho, inkqubo yonyango, umhla kunye nexesha lokuhlala kwakho. Ngolwazi oluthe kratya kwi utyelelo eMedical Visa apha.
Ukuba ufuna umongikazi okanye umntu osebenza kwezonyango okanye ilungu losapho ukuba likuncede, loo nto inokuchazwa kwileta. A Iphepha lokundwendwela lonyango iyafumaneka.
Yintoni endifanele ndiyilindele emva kokuba ndigqibe isicelo seVisa yaseIndiya kwi-Intanethi?
Emva kokuba uyigqibile iFom yesicelo seVisa yaseIndiya, kuya kufuneka uvumele iintsuku zeshishini ezi-3-4 ukuba isigqibo senziwe. Uninzi lwezigqibo zenziwa kwiintsuku ezi-4 kwaye ezinye zithathe iintsuku ezi-7.
Ngaba ikhona into endifuna ukuyenza emva kokungenisa ifomu lesicelo seVisa laseIndiya?
Ukuba kukho nantoni na efunekayo kuwe iya kuqhagamshelana neqela lethu leDesika yoNcedo. Ukuba kukho naluphi na olunye ulwazi olufunwa ngamaGosa aMfudukayo oRhulumente waseIndiya, iqela lethu leedesika zoncedo liza kunxibelelana nawe nge-imeyile kwimeko yokuqala. Awudingi kuthatha manyathelo.
Unganxibelelana nam emva kokuba ndingenise isicelo sam seVisa yaseIndiya?
Asinakho ukunxibelelana nawe kwiimeko ezininzi ngaphandle kokukuthumela isiphumo seSicelo seVisa yaseNdiya esivumayo. Asinakunxibelelana nawe kwiimeko zonke.
Kwipesenti encinci / encinci yamatyala sinokunxibelelana nawe ukuba ifoto yobuso ayicacanga kwaye ayithobeli I-India Visa yeemfuno zeFoto.
Kuthekani ukuba ndifuna ukutshintsha ulwazi kwifomu yam yesicelo saseIndiya eVisa emva kokungenisa?
Ukuba uyabona ukuba wenze impazamo kwisicelo sakho, unganxibelelana nathi kwiDesika yoNcedo. Kuxhomekeka kwinqanaba inqanaba lesicelo sakho, linakho ukuhlengahlengisa iinkcukacha.
Ndingayitshintsha iVisa yam yabaKhenkethi ibe yiVisa kwiShishini kunye neVisis emva kokugcwalisa iFomu yeSicelo seVisa yaseIndiya?
Emva kokuba ifomu yokufaka isicelo ye-Visa yase-India ingenisiwe, unokunxibelelana neDesika yethu yoNcedo, ngesiqhelo ukuba isicelo sakho singaphezulu kweeyure ezingama-5 ukuya kweli-10 emva kokungenisa isicelo sakho, sinokuhamba kade njengesikhokelo jikelele. Nangona kunjalo, unokunxibelelana neDesika yethu yoNcedo kwaye banokucinga ukulungisa isicelo sakho.
Qinisekisa ukuba ifoto yakho yobuso iyazifezekisa ezi mfuno njengoko zifunwa nguRhulumente wase-India. Ikopi yakho yokujonga ipasipoti nayo kufuneka icace kwaye ifundeke, ilula kakhulu, ibuthukile, imnyama kakhulu, inqunyulwe, ingxolo, imoyikhi, imifanekiso eneflakhthi ayizokwamkelwa.
Funda kabanzi malunga I-India Visa yeemfuno zeFoto.
Funda kabanzi malunga Iimfuneko zepasipoti yaseIndiya.
Abemi baseMelika, Abemi baseUnited Kingdom, Abemi baseCanada kwaye Abemi baseFrance unako Faka isicelo kwi-Intanethi eIndiya.
Isicelo seIndiya eVisa